अनलाइनको माध्यमबाट सुविधा दिइरहेका छौं : अर्जुन केसी [अन्तर्वार्ता] « Nepal'S Largest Digital Online Newspaper (Magazine)
जेष्ठ २३, २०७९ सोमबार
विश्वमा प्रत्येक दिन नयाँ नयाँ सूचना प्रविधिको विकासले निरन्तर तीव्रता पाइरहेको छ । प्रविधिको विकाससँगै नेपालमा पनि प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गएको छ । धेरै कामहरु अनलाइन माध्यमबाट सम्पन्न हुन्छन् ।
यसरी नै अनलाइनको प्रयोगबाट यातायातको सुविधा दिने उद्वेश्यले सुरु गरिएको ट्याक्सीमाण्डु नामको संस्थाले सन २००९ देखि काम गर्दै आएको छ । ट्याक्सीमाण्डुले प्रदान गरिरहेको सुविधा र प्रभावको बारेमा ट्याक्सीमाण्डुका सञ्चालक अर्जुन केसीसँग गरिएको कुराकानी ।
ट्याक्सीमाण्डुको परिचय दिनुसन् ?
ट्याक्सीमाण्डु भन्ने बित्तिकै नामैबाट बुझिन्छ कि, यसले अनलाइन ट्याक्सी बुकिङको काम गर्छ । हामीले यो व्यवसाय सन २००९ मा सुरु गरेको हो । तर कोरोना महामारीले गर्दा सकृय भएर काम गर्न सकिएन । कोरोनाको संक्रमण कम हुन थालेपछि मात्रै हामीले फेरि सुरु गरेका छौँ । जो ट्याक्सी चड्ने यात्रुहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुले घरबाट नै अनलाइनबाट ट्याक्सी बुक गरेर चड्न पाउनुहुन्छ । घरसम्म नै पुगेर हामीले सेवा दिइरहेका छौं ।
यो व्यवसाय गर्ने सोच कसरी आयो ?
यो व्यवसाय गर्ने सोच र योजना २००९ मा नै आएको हो । इन्टरनेश्नल ट्राभल्स गर्दा विदेशमा जुन खालको सुविधा देख्छौँ, व्यवस्थित पन देख्छौँ । त्यसैलाई नै नेपालमा उपलब्ध प्रविधिको प्रयोग गरेर अनलाइनको माध्यमबाट ट्याक्सीले कसरी सेवा सुविधा दिन सकिन्छ भन्ने अध्ययनबाट नै ट्याक्सीमाण्डुको जन्म भएको हो ।
पठाओ र ट्याक्सीमाण्डुबीच के फरक छ ?
यसमा उस्तै नै हो । यो क्षेत्रमा पछिल्लो समय धेरै मान्छेहरु लागिपरेका छन् । यसमा हामीले विशेष गरि ट्याक्सी व्यवसाय र ट्याक्सीलाई नै फोकस गरेर आधुनिक तरिकाले सुविधा दिने गरेको हो । कुनै एउछा संस्थाले मात्रै यस्ता व्यवसाय सञ्चालन गर्दा मनोपोली बढ्छ । त्यसो हुनाले प्रयोगकर्ताहरुलाई सुविधा दिन कुरामा प्रतिस्पर्धा हुन पर्छ । बजारमा यस्ता कम्पनीहरु अझै खुल्न जरुरी छ । यसरी खोल्दा अरुको कपि गरेको भन्न मिल्दैन ।
ट्याक्सीमाण्डु हाल कत्तिको प्रभावकारी भएको छ ?
ट्याक्सि भनेको अत्यावश्यक पर्ने सवारी साधन हो । यसमा प्रयोगकर्ता अन्यमा भन्दा केही कम छ । यदि कसैसँग दुईटा वा तिनटा लगेज लिएर हिँड्न पर्दा त्यसबेलाको विकल्प नै ट्याक्सी हो । अथवा अस्पताल जान पर्दा या अन्यत्र जान पर्दा पनि अत्यावश्यक साधनको रुपमा पनि ट्याक्सी प्रयोग भैरहेको छ । ट्याक्सी चड्ने मान्छेलाई हामीले सविधा मात्रै दिइरहेको हो । बाटोमा गएर धूलो र हिलोमा उभिएर ट्याक्सी खोज्ने बाध्यतालाई हामीले समाधान गरेको हो । अनलाइनबाट हामीले सहजीकरण मात्रै गरिदिएका हौं ।
अहिले मोबाइल सबैले चलाउन जानेका छन् । हामीलाई हटलाइन नम्बरमा सम्पर्क गरेर (९८०२००६०४०) पनि मलाई यहाँबाट यस्तो ठाउँ पराइदिउँ भनेर फोन गरेर सेवा लिन सक्नु हुन्छ ।
ट्याक्सीमाण्डुको डिजिटल मिटर हेलि राइट कसरी प्रयोग गर्ने ?
कुनै पनि युजरहरुले अनलाइनबाट पनि बोएन बाटोमा आएर कुनै पनि ट्याक्सीलाई रोकेर ट्याक्सीमाण्डुको मिटर सिस्टममा जाउँ न, भन्यो भने त्यसमा नेपाल नेपाल सरकारले त्योकेकै रेटमा ट्याक्सीले ट्याक्सीमाण्डुको डिजिल मिटरमा लगेर छोड्दिन्छ । डिजिटल हेलि मिटर भनेर सुरु गरेका छौं । अहिलेसम्म हाम्रो कम्पनीमा नभएका तीन हजार ट्याक्सीले सुरु गरिसकेको छ । अहिले पनि त्यो मिटर राख्ने काम निरन्तर भइरहेको छ ।
ट्याक्सीमाण्डुको अन्य सुविधाहरु केके छन् ?
हामीले ट्याक्सीमाण्डुका पार्टनरहरुको लागि अहिलेको विभिन्न अफरहरु मध्य सर्विसिङको मोविलमा हामीले ५० प्रतिशत छुट दिएका छौं । पेट्रोलमा पनि छुट दिइरहेका छौं । समय र आवश्यक्ता हेरेर अन्य सुविधाहरु पनि छन् । त्यसमा हामी पाटनर्सहरुका लागि र युजरहरुका लागि पनि आवश्यक सुविधाहरु थपिनै रहने छौं ।
यो व्यवसायमा कस्ता समस्याहरु आएका छन् ?
हाम्रोमा समस्या भन्दा पनि नेपाल सरकारले यस क्षेत्रमा पनि नियम बनाएर नियमन गर्यो भने अझै राम्रो हुने थियो । नियमन गर्ने निकाय नभएकोले केही अव्यवस्थित भएको जस्तो हामीले महसुस गरिरहेका छौं ।
प्रकाशित मिति : जेष्ठ २३, २०७९ सोमबार ५ : १५ बजे